Umdyarho wamahashe - uNoti Caballos | Amahashe eNoti
Las imidyarho yamahashe bahambisa isixa semali esimangalisayo. Ngokukodwa xa ezi ziphikisana kwi imidyarho yeembaleki, ngokuphumelela nokuphulukana namahashe. Wonke umntu ozihloniphayo umdyarho wamahashe obheja ubheja amaxesha ngamaxesha.
Kule ndawo Uya kufumana yonke into enxulumene nehlabathi lomdyarho wamahashe, apho sinokulazi ngcono ihashe ngalinye eliphumeleleyo, iintlobo zokubheja, njani kwaye phi ukugembula, zithini izixa, iingcebiso kunye nezinye iinkcukacha ukuba ithamsanqa elihamba nathi liya kuba luncedo kakhulu xa ubeka ukubheja.
Ngakolunye uhlangothi asinakulibala ukuba ngumdlalo apho ukuhamba kwemali eninzi kunokubangela iingxaki kwaye kufuneka siwulumkele lo mbandela ukunqanda ukuphazamiseka okuhlukeneyo.
IHippodrome yeLa Zarzuela kunye nembali yayo
IHipódromo de La Zarzuela imi ngaphandle kwedolophu yaseMadrid. Endle ezintabeni nge ...
Olona khuphiswano lwehashe lubalaseleyo kwihlabathi
Ngaba ungomnye wabo bonwabela ukubukela ihashe libaleka? Emva koko mhlawumbi ungomnye wabo babona izinto ezingekhoyo, bonwabele ...
Awona mahashe mabalaseleyo embalini
Umdyarho wamahashe ngokuqinisekileyo uhamba ngokukhawuleza. Umboniso ococekileyo ngandlela zonke, ophakamisa iimvakalelo kwaye ubandakanye ...
Iindawo zokubaleka ezidumileyo emhlabeni
Ihashe ngokungathandabuzekiyo lelinye lamaqabane athembekileyo okuhamba nabantu ...